डा. केसीको अनशनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चासो, माग पूरा गर्न वार्ता सुरु – live 60media
१९औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारसहित विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर डा. केसी अनशन बसेको मंगलबार २३औँ दिन पुगेको छ । गत भदौ २९ गतेबाट अनशन सुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि चौतर्फी रुपमा सरकारमाथि दबाब सृजना भएको छ।
यही बेला मंगलबार बसेको सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीको जीवनरक्षाबारे सदस्यहरुले चासो राखेका छन् । अनशन बसेको तीन हप्तापछि सत्तारुढ दलको बैठकमा डा. केसीबारे छलफल भएको हो। सदस्यहरुले डा. केसीको अनशन र उनको जीवनरक्षाबारे जिज्ञासा राखेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे आफूले चासोका साथ काम अघि बढाएको जानकारी गराएका हुन् । उनले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता सुरु गरेको बैठकलाई जानकारीसमेत गराएका छन्।
बैठकको अधिकांश समय डा. केसीबारे खर्चेका नेकपाका नेताहरुले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । जवाफमा ओलीले आफूले आवश्यक रुपमा पहल गरिरहेको जानकारी दिए। शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई कुरा गर्न डा. केसीकहाँ पठाएको र डा. केसीले माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने जवाफ दिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रिफिङ गरेका छन्।
नेकपा सचिवालय बैठक बस्नुअघि मंगलबार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोली डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेको थियो। साथै बैठक बस्नु अघि सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताएका थिए। मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ।
← गाडी भाडा धेरै लिने ५ जना पक्राउ !
दशैंको बेला “लकडाउन” बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै यस्तो एस्तो भन्यो जान्नै पर्ने →